भर्जिन हिरोइन ! - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः माघ ७, २०७४ - साप्ताहिक
भर्जिन हिरोइन !
मरिष्का पोखरेललाई दर्शकले के म तिम्रो होइन र तथा चपली हाइटमा देखिसकेका छन् । यी दुवै चलचित्रले उनको चर्चा त बढायो, तर उचाइ भने दिन सकेन । म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकै बेला नाट्यकर्मी तथा अभिनय प्रशिक्षक विशारत बस्नेतले उनलाई एउटा चलचित्रको मुख्य भूमिकाका लागि रोजे ।
संभवत: चलचित्रको शीर्षक सुनेर मरिष्का झस्किन पनि होला– मिस्टर भर्जिन । गौरव पहारी, विजय बराल, भोला सापकोटाकी एक्ली हिरोइन हुन् पाउनु पोखरेलका लागि राम्रै अवसर थियो । जीवनमा कहिल्यै यौनको आनन्द नलिएकालाई भर्जिन भन्ने चलन छ ।
चलचित्र मिस्टर भर्जिनका नायक त भर्जिन युवक भए, नायिकाको भूमिका चाहिँ के त ? भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक विशारत मज्जाले हासे र भने– मिस भर्जिन । भनेपछि मरिष्का यौन मनोविज्ञानमा आधारित निर्माणाधीन चलचित्र मिस्टर भर्जिनकी एकमात्र भर्जिन हिरोइन हुन् त ?
लागूऔषधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बर्दिया
मिस्टर भर्जिन प्यारोडी प्रतियोगिता
‘गीत’ का लागी अब २५ जना विच अडिसन जेष्ठ १०, २०७६
सुनिलको तयारी जेष्ठ ८, २०७६
‘दासढुंगा’ च्याप्टर २ बन्ने जेष्ठ ८, २०७६
निर्माता संघ र लुम्बिनी जेनेरल इन्सुरेन्स बीच 'चलचित्र प्रोजेक्ट बिमा' सम्झौता जेष्ठ ७, २०७६
नहोस् ह्याट्रिक जेष्ठ ७, २०७६
आफ्नै छोरोलाई हिरो बनाउँदै रातो टीका निधारमा घोषणा जेष्ठ ६, २०७६
धीरजको प्रष्टीकरण जेष्ठ ६, २०७६